राजधानीका रुपमा प्रदेशले पनि नपत्याएको दाङ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / राजधानीका रुपमा प्रदेशले पनि नपत्याएको दाङ
राजधानीका रुपमा प्रदेशले पनि नपत्याएको दाङ
Posted by: युगबोध in विचार February 13, 2018	0 255 Views
उच्च अदालत भएकै सबै सात स् थानमा अर्थात प्रदे श ५ को हकमा दाङमै अस् थायी राजधानी तो क्न लागे का प्रधानमन्त्रीलाई २०७४ माघ ३ मा बिहान ९ दे खी १२ सम्मको क्याविने टले निर्णय गर्न पाएन । प्रदे श ३, ५ र ७ का विषयमा विवाद भएपछि बालकृष्ण खा“डकै निरन्तर दबाब र बिरो धमा तथा क्याविने टमा बुटवल क्षे त्रमै बो ल्ने हक्की मन्त्रीका कारण पुन बे लुका बो लाइयो  । विवाद, दबाब र असन्तुष्टिका बीच सरकारले मुकाम तो के को थियो  । राजधानी कहा बनाउने भन्दा पहिले कस् तो र कसरी हुनुपर्छ भन्ने तथ्य अहं हुन्छ । राजनीतिक भन्दा आर्थिक र सामाजिक मुद्दा बन्नुपर्ने मा राजनीतिको फो हो र खे लले ख्वाप्पै निल्यो  ।
किन दाङ ?
भौ गो लिक बनावट, सामाजिक, सांस् कृतिक, ऐ तिहासिक, पर्यटकीय, प्राकृतिक बरदान र वातावरणीय अनुकूलताको विशिष्टता रहे को छ । हुस् सु, कुहिरो नलाग्ने भएकाले २४ सै घण्टा र १२ महिना नै हवाईमार्ग सुचारु रहनसक्छ । हत्या हिंसा, आपराधिक घटनालगायतका घटना न्यूनीकरण गर्न पनि सीमादे खि टाढा छ । त्यसो त काठमाडौ ंबाट आएको विज्ञ टो लीले सीमादे खिको दूरी, पूर्वाधार र शहर विस् तारको पर्याप्त सम्भावना भएका मझौ ला शहर भएको भन्दै उपयुक्त भनिसके को हो  ।
पहिले दे खि नै दाङलाई दे शकै दो स्रो राजधानी भनी प्रस् तावित गरिएको थियो  । माओ वादी के न्द्र र ने पाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष तथा उच्चस् तरीय ने ताले मुख खो ली लविङ गरे का थिए । रुपन्दे हीका ने ता, ब्यापारी र जनता सकारात्मक रहे का थिए, दाङमा आफ्नो घर ब्यवसाय विस् तार गदैर् थिए । प्रदे श ५ को पूर्वमा नवलपरासीदे खि पश्चिम बर्दियासम्मको तथा १२ जिल्लाकै भूभागको के न्द्रबिन्दु रहे काले समविकासलाई पनि अंगीकार गर्न सक्छ । समशीतो ष्ण जलवायु भएको र बिभिन्न जनजाति, भे षभूषा, धर्म, प्राकृतिक सौ न्दर्य रहे को प्राचीन थलो दुई हजार नौ सय ५५ वर्ग किमीमा फै लिएको दाङ जिल्ला समुद्र सतहदे खि २१३ मिटरदे खि २०५८ मिटर उचाइमा छ । पा“च लाख ५२ हजार पा“च सय ८३ जनसंख्यामा ५२.७६ प्रतिशत महिला छन् ।
विश्वको अग्लो धार्मिक धरो हर पाण्डे श्वर महादे वको त्रिशुल, धार्मिक धरो हर अम्बिके श्वरी, बराह क्षे त्र ताल, गढीटाकुरा, जालपादे वी, कालिका भवानी, जखे रा ताल, सवारीको ट, छरछरे खो ला, चरिङ्गे दह, भो टे दह, रिहारलगायतका तालतलै या पर्यटन प्रबद्र्धनीय छन् । उपत्यकालाई चारै तिरबाट चुरे , महाभारत, भावर, डुरुवाडा“डा तथा अनगिन्ती चट्टानहरुले अरबौ रुपै या“को पर्खाल जस् तै सुरक्षा दिएको छ । न बाढी, न पहिरो , न शीतलहर बाख्लो हुस् सु, न लू, न हिमपात बरु गर्मी समयमा चिसो हावा बगिरहन्छ । प्रशस् त खाली जग्गा र गुठीका जमिनहरु विस् तारका लागि छन् ।
उच्च अदालत, प्रादे सिक प्रहरी, टे लिकमको स् थापना, आउदै गरे को से नाको प्रादे शिक कार्यालय, आयल निगमको डिपो तथा बुटवल पर्यटकीय र ने पालगञ्ज औ द्यो गिक राजधानी बनाउने बताउ“दै थिए । सरो कार समितिको टो लीस“ग कांग्रे स सभापति, एमाले अध्यक्ष र माओ वादी के न्द्रका अध्यक्ष सबै ले उपयुक्त र विकल्परहित बताएका थिए र टो ली मक्ख हु“दै फिर्ता भई निष्क्रिय रह्यो  । प्रचण्डले त झनै आफू प्रधानमन्त्री भएको बे ला उच्च अदालत, गृहमन्त्रालय, जनार्दनले प्रहरी कार्यालय तथा पार्टीले प्रादे शिक कार्यालय खो ल्ने आफ्नो पार्टी भएको बताएका थिए ।
एशिया महाद्विपकै सबै भन्दा ठूलो उपत्यका दाङ भएर पनि पहिचान र गौ रवलाई दे श, विदे शस“ग जो डिन सकिरहे को छै न । राजनीतिक विकासक्रममा अग्रणी सहभागिता भए पनि दाङ अपे क्षितरुपमा समविकासको सिद्धान्तअनुरुप प्राप्त हुने विकास र प्रगतिका अवसरहरुबाट लामो समयदे खि बञ्चित भएको छ । सीमा सुरक्षा, भौ गो लिक तथा वातावरणीय उच्चता, पूर्वाधार तथा स्रो तसाधनको उपलब्धता र विस् तार गर्न सकिने प्रचुर संभाब्यता यावत तथ्यहरुलाई आत्मसात गर्दा के न्द्रीय नभए पनि प्रादे शिक राजधानी दाङ उपत्यकालाई दिनु औ चित्यपूर्ण, तर्कसंगत र न्यायसंगत ठहर्छ ।
रुपन्दे ही, बुटवल पर्यटकीय क्षे त्रका रुपमा ने पालमा मात्र नभई विश्वमै परिचित छ । पर्यटकीय पहिचानका साथ महत्वपूर्ण विकासका संभावना तथा आधारहरु खडा भइसके का छन् भने लुम्विनी, भै रहवा क्षे त्रमा औ द्यो गिक क्षे त्र र को रिडर विकसित छ । ने पालगञ्ज औ द्यौ गिक क्षे त्रका रुपमा सवल र सक्षम भइरहे को छ । विकासका अवसर र आधारहरु बनाइसके का यी क्षे त्रहरुले राजधानी भए पनि नभएपनि खासै फरक लिदै नन् र पनि दाङ उपत्यकालाई साझा सहमति र अवसर दिई सामाजिक न्याय गर्नुपर्छ ।
सरकारले अस्थायी राजधानी बुटवलमा घो षणा गर्दे छ भनी दाङबाट निर्वाचित सांसद कृष्णबहादुर महराले माघ २ गते अपरान्हदे खि शुरु गराएको आन्दो लन माघ ३ गते रुपन्दे ही घो षणा भए पनि माघ ६ गते राजधानी बुटवलै रही उनी काठमाडांै बाट हे लिकप्टर चढी लमहीमा आएपछि तुहियो  । आन्दो लनकारीहरु लावालस् करसहित प्राडो , मर्से डिज, स् कार्पियो बाट लमही लाग्दा र ने ता काठमाडांै बाट हे लिकप्टरमा आउ“दा औ चित्यहीन, सर्वसाधारणलाई दुःख दिने र गरिखाने लाई अप्ठे रो पार्ने बलमिचाई आन्दो लनका रुपमा चित्रित भयो  । शुरुमा पत्रकार र ब्यवसायीबाट सञ्चालित आन्दो लन राजनीतिक दललाई जिम्मा दिइयो र ने तृत्व लिने तिनै दलका सभापतिले लमहीमा लगी विसर्जन गरिदिए ।
राजधानी फिर्ता नभए पनि हे पे र निर्णय गर्ने लाई सहिदै न । आमहड्ताल गरिन्छ । राष्ट्रिय बहस बन्यो र के न्द्रलाई सुनाउन सकियो भन्ने उपलब्धि मान्ने आन्दो लन समितिका सदस् य सचिव मान्दछन् । चारदिने आमहड्ताल दल बहादुरहरुको अर्थात जग्गा दलालहरुको भनी चित्रित गरियो  । किनभने दुई लाख पर्ने जग्गा किनबे च तथा बयाना १०, १५ गुणा बढीमा भएका थिए । सर्वसाधारण आन्दो लनमा थिएनन् जुन अबुझपना थियो  । संघीय संसदमा निर्वाचित कृष्णबहादुर महरा र प्रदे शसभामा निर्वाचित शंकर पो ख्रे लको पुतला दहन गरियो  । सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौ ज गरिए । अराजक र उदण्डताको पर्याय भएको उक्त आमहड्तालमा बे बी किङका नारा लगाइए । संघीयताबिरुद्ध आवाज उठाउने वातावरण बन्यो  । सरसफाइ अभियन्ताको ने तृत्वको आन्दो लनमा टायर बाली बाटो र वातावरण कालै बनाइएको थियो  । बन्द सकिएपछि बाटो त भिक्टो रिया कले जका बिद्यार्थीहरुले पे ण्ट गरे र सफाचट बनाए तर बातावरण र हरे क दाङबासीको फो क्सो र शरीरमा छिरे का कणहरु कसले र कसरी सफा गर्ने ?
बुटवल र दाङ कसै को नपुग्ने दुईतिहाई
सरकारले बुटवललाई प्रदे श ५ को अस् थायी मुकाम तो के पनि दाङले निरन्तर राजधानीको माग गरे काले विवाद कायमै छ । संवै धानिक ब्यवस् थानुसार प्रदे शसभाले राजधानी तो क्न दुईतिहाई मतबाट निर्णय गर्नुपर्दछ । प्रदे श ५ मा कुल ८७ सांसद छन् । प्रदे शको राजधानी सार्न ५८ सांसदको जरुरत पर्दछ । दाङको पक्षमा दाङ– १०, बा“के – १०, बर्दिया–६, पूर्वी रुकुम–३, रो ल्पा– २ र प्युठान–४ का एमाले , माओ वादी, काग्रे स, संघीय समाजवादी फो रम र राजमो स“ग सम्बन्धित ३५ सांसद छन् । दाङपूर्वको राजधानीको माग गर्दै आएको बुटवल र दाङको समदूरीमा रहे को दुबै को बिकल्पका रुपमा प्रस् तुत कपिलवस् तुको प्रदे श सांसद संख्या १२ छ ।
बुटवलको पक्षमा भूगो लको सुगमताका कारण पश्चिम नवलपरासी–६, रुपन्दे ही–१८, पाल्पा– ८ , गुल्मी–४, अर्घाखाची–४ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४० सांसद दे खिन्छन् । कपिलवस् तुका बुटवलका पक्षमा आए ५२ पुगी दुई तिहाइका लागि छ मत अपुग हुन्छ भने दाङले लिए थप ११ मत पुग्दै न । तथापि दलीय सहमति वा एमाले माओ वादीको ह्वीपले भने फरक पारी दाङका लागि दुई तिहाई पुग्नसक्छ । विष्णु पौ डे ल, प्रदीप ज्ञवाली र गो र्कण विष्ट एमाले को के न्द्रीय राजनीतिमा भएकाले एमाले को ह्वीप दाङका लागि लाग्ने दे खिदै न । शंकर पो ख्रे ललाई मुख्यमन्त्री बनाएर सन्तुष्ट पार्न एमाले अग्रसर छ ।
अन्तमा, बुटवलका ने ता तथा ब्यवसायीहरुको प्रतिष्ठाको विषय भएकाले अस् थायी राजधानी भईसके कामा चित्त बुझाउन जरुरी छ । के न्द्रीय ने ताले समे त राजधानी बनाउन भने र भो ट मागे का तथा निर्वाचित भएका थिए । महराले सरकार छो ड्नु, शंकर पो ख्रे ल विष्णु पौ डे ल अगाडि ओ झे ल र नतमस् तक हुनु र मुख्यमन्त्री पदस“ग साट्नु र अडान छो डिदिनु र डिल्ली चौ धरीको है सियतले नभ्याउनु कागताली हुनसक्छ । जनताले भो ट दियांै , जिम्मा लगायौ ं र अपे क्षा पूरा नगरे अर्काे पटक पछार्ने शान्त मुडमा छन् । जनताको भो ट र अधिकार लगी सांसद बने का र बहुमत पाएको वाम गठबन्धनले न्याय गर्ने है सियत र हिम्मत दे खाउनुपर्दछ ।
(न्याम्स वीर अस् पतालका सहप्राध्यापक स् तम्भकार डा. बुढाथो की ने पाल चिकित्सक संघका के न्द्रीय सहको षाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
Previous: विश्व एक सूत्रमा आबद्ध गनेर् पर्व हो महाशिवरात्रि
Next: महायज्ञमा अनावश्यक दान विवाद